DAAWO SAWIRADA: Roobab Khasaare geystay oo ka da’ay Qardho & Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRADA: Roobab Khasaare geystay oo ka da’ay Qardho & Wararkii ugu...
DAAWO SAWIRADA: Roobab Khasaare geystay oo ka da’ay Qardho & Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda..
Qardho (Halqaran.com) – Waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay ka da’ay magaalada Qardho roobab xoogan oo sababay daadad badan, kuwaasi oo ku soo rogmadaan Magaalada, islamarkaana Khasaare kala duwan geystay.
Inta badan dhismayaashii Magaalada gudaheeda ayaa waxaa soo gaaray bur bur xoogan oo ka dhashay daadadka Magaalada ku dhuftay.
Sidoo kale waxaa jira Khasaare dhimasho ah oo gaaraya illaa 5 ruux oo carruur u badan, kuwaasi oo ku haftay Biyaha ku soo rogmaday Magaalada gudaheeda sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan Magaalada Qardho.
Bakhaaradii ay ku jireen raashinka ayaa waxaa qaaday daadadka, waxaana jirtay xaaladda Magaalada inay tahay mid aad u adag marka loo fiiriyo Khasaaraha soo gaaray guud ahaan Magaalada.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland ayaa ku baxay Magaalada Qardho, halkaasi oo sida qorshaha uu yahay la doonaayo gurmad in la gaarsiiyo qoysaska dhibaatada ay soo gaartay.
Roobab daadad la socdaan
Roobab Khasaare geystay oo ka da’ay Qardho